Kuchengetedzwa kwekutarisa Radar Fekitori - China Kuchengetedza Kuongorora Radar Vagadziri, Vatengesi
XW / SR216 Chengetedzo Yekutarisa Radar
1.Product basa uye shandisa Iyo XW / SR216 chengetedzo yekutarisa radar inowanzo sanganisira radar array uye simba rekuparadzira bhokisi rekutonga. Iyo inoshandiswa pakutsvaga, kunyevera uye kunongedzera chiratidzo chevanofamba netsoka, mota kana ngarava munzvimbo dzakakosha senge kumiganhu, nhandare, uye zvigadziko zvemauto. Iyo inogona kunyatso kupa iyo yakanangwa Track ruzivo senge kutakura, kureba uye nekukurumidza. 2.Main maratidziro Item Performance parameter Kushanda system Yakagadziriswa nzira (azimuth phase scan) Oper ...
XW / SR215 Chengetedzo Yekutarisa Radar
1.Product basa uye shandisa Iyo XW / SR215 radar inowanzo sanganisira 1 radar array uye 1 simba rekuparadzira bhokisi rekutonga. Iyo inoshandiswa pakutsvaga, kunyevera uye kunongedzera chiratidzo chevanofamba netsoka, mota kana ngarava munzvimbo dzakakosha senge kumiganhu, nhandare, uye zvigadziko zvemauto. Iyo inogona kunyatso kupa ruzivo rweTrack senge chinzvimbo chechinangwa, chinhambwe uye nekumhanya 2.Main magadzirirwo ITEM Mashandiro parameter Kushanda sisitimu Yakagadziriswa nzira (azimuth chikamu scan) Inoshanda modhi Pu ...
XW / RB101 Chengetedzo Yekutarisa Radar
1.Product basa uye shandisa XW / RB101 chengetedzo yekutarisa radar inowanzo sanganisira radar array uye adapter yemagetsi. Iyo inoshandiswa pakutsvaga, kunyevera uye kunongedzera kunongedzera kwevanofamba netsoka uye mota munzvimbo dzakakosha senge kumiganhu, nhandare, uye zvigadziko zvemauto. Iyo inogona kunyatso kupa chinongedzo chinzvimbo, chinhambwe uye Ronda ruzivo senge kumhanya. 2.Main magadzirirwo ITEM Mashandiro parameter Kushanda sisitimu Yakagadziriswa nzira (azimuth chikamu scan) Inoshanda modhi Pulse ...